Ku soo dhawaaw degmada caruurta ee gudaha Värmland! Degmada Forshaga waxaa degan 11 300 oo qof oo qiimeeynaa micanaha nolosha ee fudud. Waxaan ku nabad qabnaa Deje, Forshaga iyo Olsäter, sido kalena waxaan si fiican uga nolnahay dabiicada värmland ee baadiyaha. Dhawanaanshaha waxeey noo keeyneeysaa fursado. Jawiga magaalada ama xasiloonida dabiicada? Halkaan labada nuuc ee bey'adeed waa heeynaa.
Degmada waxaa looga hadla ugu yaraan tobadanaan luuqado, waxaa ka mid ah carabi, afka iraan, afka burmo, tigrinya iyo af soomaali.
Degmada waxeey lee dahay shirkado badan oo yar iyo kuwo dhexdhexaad ah oo ka wada hoowl galo la'amo badan. In badan oo ka mid ah waxeey ku wada jiraan farsamada-ilkaha iyo daryeelka iyo baxnaaninta dhalinyarada. Degmada Forshaga waa shaqo dhiibaha ugu weeyn, shirkada madaxbanaan ee ugu weeyna waa shirkada Stora Enso. Dad badan oo degan Forshaga waxeey ka shaqeeyaan degmooyinka hareero gaar ahaan Karlstad. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan jawiga ganacsiga iyo shaqooyinka gobolka Värmland oo dhan waxaad ka heli kartaa Regionfakta.com.
Erfarna sjuksköterskor till Forshaga Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Ungdomscoach inom kommunalt aktivitetsansvar Studiekonsulent
Lärare till SFI SFI-lärare
Beläggningsförare till Stora Enso Forshaga Truckförare
Hjullastareförare på återvinningscentral Lastmaskinförare
Vårdadministratör , vårdcentralen Forshaga Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska , MAS MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Klarälvdalens samordningsförbund söker projektmedarbetare till REBUS Behandlingsassistent/Socialpedagog
Rektor till SiS ungdomshem Klarälvsgården Rektor
Elektriker till Va - verksamheten Serviceelektriker, installation
Distriktsläkare , vårdcentralen Forshaga Specialistläkare
Processingenjör till Nordic Paper i Bäckhammar Driftingenjör, maskin
Nordic Paper i Bäckhammar söker en produktionsplanerare Produktionsingenjör, elektronik
ca 11 300
Karlstad 20 km